စက္ကူကင်မရာ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » စက္ကူကင်မရာ
စက္ကူကင်မရာ APK ကို
ရီးရဲလ်အချိန်ကာတွန်းနှင့်ပန်းချီသက်ရောက်မှုသင့်ကင်မရာအစာကျွေးခြင်းအပေါ်ပြသ! သစ်တစ်ခု, မူရင်းကတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရှုပါ, စတိုင်နှင့်ဖြစ်မည်မှန်ဘီလူး, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှာနေတဲ့အံ့သြစရာရှိသည်နှင့်ကာတွန်းအတွက်ယခုသင့်ကမ္ဘာကြီးဘယ်လောက်အေးမြသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ!
ဒီကအားလုံးကိုအစစ်အမှန်အချိန်ကာတွန်း / ပုံကြမ်း / ကာတွန်းစာအုပ် / တစ်ဝက်သေံ / အဆိုးမြင်အန္တရာယ် / နီယွန်နှင့်သင့်ကင်မရာကိုတိုက်ရိုက်ခြယ်များစွာသောအခြားဆိုးကျိုးများ, မပိုပျင်းစရာ Post-သက်ရောက်မှု၏အဆုံးစွန်စုစည်းင်သည်ကိုသင်ရိုးရှင်းစွာအံ့သြရပ်တန့်မည်မဟုတ်, နေရာတိုင်းမှာ သငျသညျအမှုအရာများနှင့်ကာတွန်း-ize သူတို့ကိုကြည့်ရှိခြင်း, များမှာ!
သင်တို့ပတ်လည်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချီလွှဲနှင့်သင့်မျက်မှောက်၌ကမ္ဘာတွင်ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရခြင်း, စတိုင်ကာတွန်းသက်ရောက်မှုမဆို အသုံးပြု. ပုံနဲ့စံချိန်ဗီဒီယိုများယူသို့မဟုတ်သင့်ရှိပြီးသားဓာတ်ပုံများသူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်ဤ App ကိုနှင့်အတူမည်သည့်ကိစ္စများရှိပါက, ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ပြန်အမ်းငွေကိုငါပေးမည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာကို fixed ပါတယ်တခါသငျသညျကိုအကြောင်းကြားကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
●ငါ App ကိုဝယ်ယူပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကဒေါင်းလုဒ်မဆွဲနိုင်။
သငျသညျအကောင်းကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ပြန်ကြိုးစားခြင်းရှိသည်စစ်ဆေးပါ။ ထိုပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေးပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျနော်တို့အဖြေတစ်ခုပေးသွားမှာပါပေးပါ။
●အဘယ်ကြောင့်သင် NFC ကိုနှင့်အင်တာနက်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သလဲ?
NFC ကို Android Beam ကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်ပါသည်နှင့်အင်တာနက်ဟာ Facebook, Twitter နှင့် YouTube ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်လိုအပ်သည်။
jfdplabs.com/ffmpeg: ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို FFmpeg ၏ code က LGPLv2.1 အောက်မှာလိုင်စင်ရနှင့်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကဒီမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုသည်
သင့်ရဲ့ download ပြုလုပ် Thank you!
အဆိုပါ JFDP Labs ကအဖွဲ့
9.20 ကို MB
JFDP Labs က
InstaSweet Retro ကင်မရာ
ချိုမြိန်ကင်မရာ - ...
APUS ကင်မရာ - HD ကို ...
90s - ဆက်ကြောင်းကို VHS ...